Arizaka Raoul Rabekoto Romain, ka nilazany fa “Tsy maintsy tafita no tanjona ho an’ny baolina kitra Malagasy. Voady efa natao io, ary tsy ho solafaka an-dalana isika eo amin’ity taranjam-panatanjahantena iray ity. Efa noporofoina tamin’ny fakan-kevitra nandritra ny fihaonambem-pirenena ho an’ny baolina kitra teny Ivato tamin’ny herinandro lasa teo”, hoy izy fa manana ny politika izay apetraka amin’ny ho fampiroboroboana ity taranja iray ity ny tenako. Tsy hampidirany resaka Politika Politisianina ny fitantanana ary hatao madio tahaka ny nataoko teo anivon’ny CNAPS . Efa mianga isika izao ary efa nanitsaka ny CAN ka nanakoako maneran-tany ankehitriny izany Barean’i Madagasikara izany. Ny hirariana dia ho tojo hatrany amin’ny “Mondial” ny baolina kitra Malagasy. Ho lohalaharana amin’ny fitarihana ny Barea ho tonga amin’ny tanjona ny tenako sy ny Federasiona tarihako, hoy hatrany Atoa Arizaka Raoul. Aoka tsy afangaro amin’ny resaka politika maloto ny ezaka ataon’ny mpitantana tahaka izao ataon’ny federasionan’ny baolina kitra izao. Tsy mahakivy sanatria, hoy izy namarana ny teniny, ny resabe atao amin’ny tenako amin’izao fa vao mainka aza hampirisika ahy hizotra any amin’ny tsara hatrany. Mampalahelo, hoy izy, fa matetika ny olona manam-piniavana hanao zavatra tsara no hipoiran’ny indro kely hatrany. Manome toky anefa aho fa hampiasa ny fahaizako manontolo hampisongadina an’ity baolina kitra Malagasy ity.